एकवर्ष अगाडीसम्म १५ हजारमा नोकरी गर्ने यी ज्ञानेन्द्र शाहीसँग ९० लाखको गाडी कहाँबाट आयो ? यस्तो छ वास्तविकता – Ramailo Sandesh
पछिल्लो केहि समयदेखि सामाजिक संजालमा आलोचनाको पात्र बन्ने व्यक्तिहरु बाध्य एक ज्ञानेन्द्र शाही हुन्। उनी मात्र नभई आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला पनि एक हुन्।
यी दुई व्यक्तिको नाम प्राय जसो सामाजिक संजाल चलाउनेको लागि अपरिचित व्यक्ति होइनन्। कहिले विभिन्न विषयमा आवाज उठाउदै पक्राउ पर्दै हिरा हुँदै आएका यी दुईको चर्तिकला पछिल्लो समय देखिन थलिएको छ।
विभिन्न समस्यामा समाजसेवाको नाममा काम गर्दै आएका यी दुईजना केहि समयदेखि निकै आलोचनाको सिकार बन्न पुगे। कारण थियो स्थानीयसँग गरेको झगडा र पत्रकारलाई धम्की।
केहि समय अगाडी ज्ञानेन्द्र शाही र स्थानीयबीच सुर्खेतमा झडप भयो । राहत बाँड्न गएका बेला स्थानीयको समूहले आफूहरुमाथि कुटपिट गरेको शाहीको दाबी थियो ।
तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपी राजेन्द्र भट्टले शाहीको समूह खाना खाएर फर्कदै गरेको र मजदुरी काम गरेकाहरु पनि फर्कदै गर्दा बाटोमा विवाद भएर झगडा भएको बताए ।
अर्की आफूलाई अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौलाले पनि यही समाचार जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएपछि शाहीले त्यहाका पत्रकारद्वय शिखा श्रेष्ठ र धिरज बस्नेतलाई टेलिफोनबाट अपशब्द प्रयोग गरी धम्कीसमेत दिएकी छन् । त्यसप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
ज्वाला संग्रौलाले विभिन्न स्थानमा राहत वितरण गर्दै पनि आएकी छन् । यस्तै, विभिन्न समस्यामा परेकाहरुलाई पनि सहयोग गरेको उनको गतिविधि देखिन्छ ।
तर, तिनै संग्रौला राहत बाँड्न जाने क्रममा काठमाडौंको महाराजगञ्जमा प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मणिकान्त झासँग विवाद भयो । उनले प्रहरी कार्यालयमै बर्दीमा रहेका प्रहरीलाई थकाईनन् मात्र ‘एनि हाउ’ सरुवा गराइदिने चेतावनी पनि दिइन् ।
झाले राहत बाँड्न हिँडेका संग्रौलाको टोलीलाई सवारी पास नभएपछि रोकेका थिए । अरु परिचयपत्र र लाइसेन्स पनि नभएको प्रहरीको दाबी छ । संग्रौलाले वादविवादमा क्रममा रंगभेदी टिप्पणीसमेत गरेकी छन् ।
शाहीमाथि अर्को ठुलो आरोप लागेको छ। शाहीमाथि पुरानो ऋण नतिरेको आरोप छ । शाहीले विभिन्न व्यक्तिलाई तिर्नुपर्ने लाखौं रुपैयाँ वर्षौंदेखि नतिरी सामाजिक अभियन्ता बनेको बताइन्छ ।
हीले काँडाघारीको पुष्कर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको ६ लाख ४१ हजार र एभरेष्ट बैंकको १ लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँको मिति उल्लेख नगरिएको चेक काटेका हुन् ।
शाहीले विदेशमा बसेका नेपाली जनताहरुले समाजसेवाको लागि पठाएको पैसाले गाडी किनेको स्रोतले बतायो।
के तपाईमा यस्ता संकेत छन् ? छन् भने तपाईं धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ